Achara achara, achara Wall Cladding, achara ịtọ - Golden achara
Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd. hiwere na 2011 ma kpuchie ebe square mita 133,400. Factorylọ ọrụ a dị na Nanjing obodo, obodo Zhangzhou ， Fujian mpaghara bụ ebe kachasị mma maka uto achara. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ebumnuche nke "ịkwalite usoro nchekwa gburugburu ebe obibi na ibelata oriri nke akụrụngwa".
Ike na ogologo achara ihe mgbidi facade ...
Egwuregwu a na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma ...
Easy echichi Strand kpara achara n'èzí f ...
High anwụ ngwa ilekọta ileghara eguzogide achara n'èzí d ...
Bamboo decking board nwere ọtụtụ njirimara: ike, ike, njupụta dị elu, nkwụsi ike dị elu, na-adịgide adịgide, wdg. Characteristicsdị njirimara ndị a na-eme ka ihe a ma ama n'ụwa. Nke ka mkpa bụ na ọ bụ ihe eji arụ ọrụ gburugburu ebe obibi nke na-ebelata oke osisi, n'ihi na achara nwere oge na-eto ngwa ngwa ma ọ nwere ike ịmaliteghachi onwe ya mgbe ọ gbachara, agbanyeghị osisi nwere ogologo oge toro ogologo (ihe karịrị afọ 25), na-egbutu ya. osisi ahu gha emebi ohia na gburugburu ya. Ọ bụ ya mere eji eji achara eme ihe n'ọtụtụ ebe n'oge a.
Achara bụ ụdị ahịhịa siri ike nke dị mma maka ime mbara ụlọ na mbadamba osisi. Achara achara na-eme ka ogige gị bụrụ ọdịdị dị mma ma mara mma. Heavylọ achara a na-atụghị n'èzí na-eji ihe achara kachasị mma, a na-emekwa ya site na teknụzụ nhazi strick ...
A na-akpọkwa achara achara achara. Ejiri eriri bamboo dị elu ma mee ya ọtụtụ puku tọn teknụzụ nrụgide dị elu. Nhọrọ nke ụdị achara achara dị ọcha karịa nke ala achara. Ọ m ...